Factory - China Keychains Abavelisi kunye nababoneleli
Izitshixo kunye neeRingi eziphambili zizipho ezilungileyo ezinokuthi zisetyenziswe ngokubanzi kwintengiso, ukunyusa, isikhumbuzi seprimiyamu kunye nokuqokelela, yenye yeendlela ezifanelekileyo zokunyusa ukubonakala kwe-BRAND. Izipho eziMnandi eziCwebezelayo zibonelela ngohlobo olupheleleyo lwezitshixo zamaXabiso kunye neeRingi eziPhambili, zingenziwa ngeBrass, i-Iron, i-zinc alloy okanye isinyithi kunye ne-acrylic, isinyithi esidityaniswe nolusu, kunye nesilivere entle kakhulu lukhetho lwemfuno ephezulu. I-logo inokwenziwa ngombala ongacacanga kwaye ingenziwa nangokubonakala okuphezulu kunye nokusikwa kwangaphakathi, imibala eyahlukeneyo iyafumaneka: umbala oqhelekileyo we-PMS, umbala ocacileyo, umbala we-glitter, ukuvutha kombala omnyama kunye nombala wobushushu obushushu, njl. Nokuba zithini na izinto zokubhengezwa kwamaqhosha kunye nemisesane ephambili oyikhangelayo, Izipho eziMnandi eziKhanyayo ziya kukwanelisa! Nxibelelana nathi kuintengiso@sjjgifts.com Okwangoku ukufumana isitshixo seSitshixo kunye neMisesane ephambili.
Ityala lePilisi yeAluminiyam enesitshixo
Isakhelo seefoto Keychains
China Factory Bottle sokuvula Keychain Mercedes B ...
Isitampu Ngaphandle Kwamaqhosha oMbala
Iifoto ezingagungqiyo Keychains
Zinc ingxubevange Keychains
I-Key Pewter Keychains
Izitshixo zePoker Chip
Uqhekeko lwamaxabiso ezinto eziphambili